3D Khariidadda Adduunka, oo ah jihada waxbarashada - Gofumed
Ogast, 2009 Cartografia, Baridda CAD / GIS
3D Khariidadda Adduunka Waxay timaadaa in aan xasuusinno qaybahaas oo loo adeegsan jiray iskuulada, inkastoo ay kartidoodu ka baxsan yihiin. Waa botton oo ku jira xog badan oo ka badan inta laga yaabo inay ku haboon tahay adduunka iyo atlas, waxa kale oo ka mid ah ilaaliyaha filinka oo ka ciyaari kara muusikada mp3 ee asalka ah.
Kartida Meelaha 3D World Map
Waxay ka koobantahay wax ka badan 30,000 diiwaanka magaalooyinka iyo waddamada, oo ay ku jiraan isuduwayaasha juqraafi iyo xogta dadweynaha. Waxa kale oo ay aqbali kartaa in xog dheeraad ah lagu daro.
Waxaad haysataa ikhtiyaarka aad ku hirgelin karto maalinta ama habeenkii, iyo sida ay ku xirantahay waqtiga nidaamka wuxuu muujinayaa sida ay u eegi doonto. Xaaladda qayb ka mid ah dunida oo habeenkii ah, ayaa iftiiminaya iftiinka habeenkii.
Waxaa lagu arki karaa shaashad buuxda, daaqad iyo sidoo kale baalal fiiqan leh wax kasta oo kale oo hufan
Waxay qiyaasi karaan masaafada, waxayna aqbalaan unugyada mitirka.
Waxay keenaysaa qaar ka mid ah miisaaniyada, laakiin waxaad ku habeyn kartaa midabada iyo hufnaanta xogaha kala duwan sida oceansiinta, jawiga, sarreynta, iwm. Dhadhanka. Dhamaadka dambe waxaa laga yaabaa in la buunbuuniyo iyadoo la samaynayo aragti xiiso leh.
Dhaqdhaqaaqyo badan, qalabka xakamaynta ayaa ku yaalla meel kasta oo meel bannaan ah.
Waxaad ku keydsan kartaa goobaha adiga oo ku qoraya lambarka keypad. Dhaqdhaqaaq ah inaad u guurto meelo xiiso leh.
Waxay leedahay dhaqdhaqaaqyo kala-soocid ah, barakac, waji iyo xannibaad xagga waqooyiga ah. Nasiib darro isbedelka kuwan oo kale ma aha mid waxtar leh, awood u leh inay ku dhexgalaan badhanka mouse-ka + ctrl, waa lagama maarmaan in la soo rogo badhanka saxda ah ee ku-meel-gaadhka ah.
Uma qalanto codsi aanad miisaan lahayn 6 MB, xogta ay ka timid ilaha sida:
gtopo30, Bangiga Warfaafinta ee Micro World, Wareysiga Adduunka, CIA Book Factory 2002, 2004, Marble Blue
Maaddaama tijaabo tijaabo ah ay la socoto lakabyada aasaasiga ah, laakiin nuqulka premium wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo dejiso 30MB xogta juqraafi. Si aad u xiiso badan ujeeddooyin waxbarasho, lacagta la bixiyay waxay u socotaa $ 29.
Kaadhka 3D World Map
Post Previous«Previous Ka saar Kalawarka ee AutoCAD 2009?
Post Next Touche Google Maps shawladdaNext »
Hal Kusoo Jawaaba "3D World Map, astaan ​​waxbarasho"
სანდრო isagu wuxuu leeyahay: